उपेन्द्र यादब जस्ता २८ जना जनताको एकै च्या*न बनाउनेको काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने ब्यक्ति हुन् बाबुराम । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
उपेन्द्र यादब जस्ता २८ जना जनताको एकै च्या*न बनाउनेको काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने ब्यक्ति हुन् बाबुराम ।
बाबुराम भट्टराई जस्तो नौ’टंकी बाज नेताको पछि लाग्ने देख्दा छक्क पर्छु म ।आफ़्नो खुट्टा कुन जमिनमा टेकेको छु भनेर थाहा नहुने नेपालको बुद्धिजिबि नेता हुन् , बाबुराम भट्टराई ।
आफु सत्तामा पुग्नको लागी हज़ारौ सिधा र सोझा जनताको रगतको होलि खेलेर , आज ऎस आरामको जिन्दगि बिताउने ..। दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको ह’त्त्या कसरि गरियो ,काशी तिवारि,नन्दमाया र मुक्तिनाथ अधिकारि जस्ताको हत्या कसरि गरेका थीए।
बाबुराम लाई सोध्नु होला यित उदाहरण को पात्र मात्र हुन् । अहिले आएर हजारौ बिदेशि दलालिहरूको सं’गठन खडा गरि हेडेका नालाएक पात्र हुन् बाबुराम । प्रभु साहा जस्ता भ्र’ष्टाचारि र ज्या’नमाराको बचाउमा लागेका ब्याक्ति हुन् बाबुराम ।
उपेन्द्र यादब जस्ता २८ जान जनताको एकै च्यान बनाउनेको काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने ब्याक्ति हुन् बाबुराम । देश टुक्र्या’एर इंडियाको प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने बाबुराम । धर्म र यो ब्याबस्था माथी प्रहार गर्ने बाबुराम ..।
अनि त्येस्ता देश द्रो’हि र नालाएक को पछि लागेर एउटा महोदय पत्रकार ले यो ब्याबस्था नै परिबर्तन गर्ने रे ..। यस्ता देशका कु पुत्र हरू बाट होशियार …
Previous वैदेशिक रो’जगार संघका अध्यक्ष दीपक राउत क्षे’त्रीले गरे यस्तो पुण्य कार्य!
Next नेता प्र’चण्डका गुरु डा. बालकृष्ण शर्माले सबै नेपालीलाई दिए यस्तो सुझाव !